Kubaya majekiseni - princetoncovid.org
Mamwe Ruzivo rwekudzivirira
Princeton Health department yakabatana neHamilton Township, West Windsor Township neOlden Pharmacy kupa kiriniki yekudzivirira Pfizer kune vane makore gumi nematanhatu nemanomwe ekuberekwa. Kukodzera kunosanganisira: Avo vanogara, vanoenda kuchikoro kana vanoshanda kuPrinceton Havasati vagamuchira mushonga weCOVID-16 (uye parizvino havana musangano) Vanokwanisa kuenda ku […]
Verenga Zvakawanda: Pfizer Vaccine Inowanikwa Kwemakore 16 ne17
Princeton Hutano, YMCA Chikwata cheApril 29 Vaccine Clinic
Princeton Health department ichave yakabata COVID-19 kiriniki yekudzivirira kuPrinceton YMCA neChina, Kubvumbi 29 kubva 10am kusvika masikati. Vanhu vane makore 18 zvichikwira vanogona kunyoresa kukiriniki pano. Iko kunyoreswa kuchavhara mushure memazana makumi masere emadhora akarongwa.
Verenga Zvakawanda: Princeton Hutano, YMCA Chikwata cheApril 29 Vaccine Clinic
Kurume 1 yekudzivirira daidzira vanozvipira
Gavhuna Murphy vazivisa nhasi kuti New Jersey ichagamuchira mazana makumi manomwe ezviyero zvemushonga uchangobva kubvumidzwa weCVID-70,000 mumashure mevhiki rino. Hurumende yakawedzerawo nhungamiro yekuti ndiani anokodzera kupihwa jekiseni Kubva musi waKurume 19, mapoka anotevera achakodzerwa nemushonga weCCV-15: Vadzidzisi, kusanganisira vashandi vanotsigira, muPre-K-19 […]
Verenga Zvimwe: Kurume 1 yekudzivirira kubaya; daidzira vanozvipira
Dhipatimendi rezvehutano yekudzivirira
Parizvino hapana madomendi ekutanga madhizaini anowanikwa kuburikidza nePrinceton Hutano Dhipatimendi. Ndokumbirawo kuti musafone kana email muchibvunza nezvekugadzwa. Kana iwe wakarongerwa muyero wako wechipiri nePrinceton Hutano Dhipatimendi, iwe ucharamba uchigamuchira iyo yechipiri dosi pane yakatarwa zuva rekugadzwa. Mushonga wekudzivirira mushonga uchiri kushoma. Princeton ari […]
Verenga Zvakawanda: Hutano Dhipatimendi rekudzivirira
Iyo Mercer County Division yehutano yakazivisa kutanga kwesvondo rino kuti yaita shanduko pakuparadzirwa kwejekiseni zvichienderana nemutemo weNJ weDzidziso. Ndokumbirawo ubaye pano paFebruary 10 Yekudzivirira Kuvandudza. ** Ndokumbira utarise: Kana iwe uine wechipiri chipimo chakarongwa nePrinceton Hutano Dhipatimendi, iwe uchagashira iyo dosi […]
Verenga Zvakawanda: County inozivisa shanduko pakuparadzirwa kwekudzivirira
Kukadzi 8 yekudzivirira
Nyika yakazivisa mamasipala eMercer County kuti panguva yekushomeka kwekudzivirira majekiseni, haichazopa majekiseni kumakiriniki emakanzuru. Nekuda kweizvozvo, makiriniki akachengetwa nePrinceton Health department nemamwe madhipatimendi ezvehutano mudunhu reMercer achaiswa panzvimbo pfupi kutanga muna Kukadzi 13. Kana huwandu hwacho hwawedzera, maseru […]
Verenga Zvimwe: Kukadzi 8 yekudzivirira yekudzivirira
Dzazvino pamusoro pekudzivirira kubva kuPrinceton Health Dept.
Verenga Zvimwe: Zvekupedzisira nezvejekiseni kubva kuPrinceton Health Dept.
Mishonga inotanga muMercer County
Kubaya nhomba kunotanga muMercer County Kwakave nezvakawanda munhau nezve nzira yekubaiwa jekiseni kudzivirira kubva ku COVID-19 chirwere uye kuyedza kwenzvimbo kuendesa mushonga. Kuburitswa, padanho renyika kwakasangana necheni dzekugovera uye zvimwe zvinhu zvine chekuita nazvo, asi munharaunda, padanho redu diki, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. […]
Verenga Zvimwe: Mishonga inotanga muMercer County